Iiarhente zokuhamba ziqhankqalaza: Ingxelo yoMphathiswa Wezokhenketho yase-Itali iyalahlekisa
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-Itali eziQhekezayo » Iiarhente zokuhamba ziqhankqalaza: Ingxelo yoMphathiswa Wezokhenketho yase-Itali iyalahlekisa
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zase-Itali eziQhekezayo • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
Umphathiswa wezokhenketho oqinisekileyo nolonwabileyo
“Ixesha lihamba kakuhle, iintlanganiso kunye neenkongolo ziqale ngokutsha. Andizukuwanika amanani, kodwa iya kuba lihlobo elihle, kufutshane ne-2019, ukuba alikho ngaphaya kwezinye iimeko. Ngamafutshane, ixesha elihle kakhulu. Sele sijonge ebusika, ukuvumela ixesha elinoxolo, ngaphandle kwamathandabuzo. ” Utshilo uMassimo Garavaglia, Umphathiswa Wezokhenketho e-Italiya, kwiNtlanganiso yaseRimini.
Sebenzisa amagama afana nokumangalisa, uxolo, kunye nokuqinisekileyo yayingeyiyo into ababefuna ukuyiva e-Italiya kuMphathiswa Wezokhenketho.
Emva kokuba uMphathiswa eveze umbono wakhe oqinisekileyo kushishino lwezokhenketho kwilizwe lakhe, iiarhente zokuhamba zivile ngokwaneleyo kwaye zathumela ileta yoqhankqalazo.
Ngamafutshane, uMbutho oZimeleyo weeArhente zokuHamba uQinisekise uMphathiswa wezoKhenketho, "Ayisiyonyani le."
"Ngokwembali," wongeze uMphathiswa, "uKhenketho luxabisa i-14% ye-GDP, kodwa inokufikelela kuma-20%. Asikokuphambana. Sinamandla amakhulu. Kodwa sifuna izinto ezithile: umzekelo, isicwangciso ngokubanzi sokutya newayini. Emva koko kufuneka sijolise ekubeni ne-60 ITS (iZiko eliPhezulu lobuGcisa labafundi boKhenketho) njengeSpain. Ngaphandle kokufumana umbutho singafumana isabelo sentengiso. ”
Uqhankqalazo lwe-MAAVI, (ii-arhente zohambo zase-Italiyane ezizimeleyo)
Ngenxa yomhla wesithathu we-D-Day, umhla weshumi elinesibhozo wesidima, owabanjwa nge-8 kaSeptemba ngo-10: 30 ePiazza del Popolo eRoma, uMongameli woMbutho weeArhente zokuHamba, u-Enrica Montanucci, wathumela uqhanqalazo olusemthethweni Ukhenketho lwase-Itali Umphathiswa u-Massimo, owayelundwendwe kwintlanganiso ye-Rimini 2021 kwaye wayebhiyozela ihlobo labakhenkethi base-Itali njengexesha lerekhodi.
Ileta eya kuMphathiswa ivela kuNks Montanucci ifundeka ngolu hlobo:
“Mphathiswa Othandekayo Garavaglia:
"Into oyibhengeze eRimini ayamkelekanga kwaphela kudidi lwabameli base-Itali. Ukuba 'ngelixesha phantse kumanqanaba e-2019' ubhekisa ebantwini, abangakwaziyo ukuya kwenye indawo, abagalele i Iindawo zokuhlala zabakhenkethi e-Itali, inika, ubuncinci kuhlalutyo lokuqala, umbono wokuba yonke into ibuyele kwinto eqhelekileyo, emva koko sinokuvumelana nawe. Iilwandle ezigcweleyo, iihotele ezipheleleyo, abantu abakungqonge…
"Nabani na osebenza njengearhente yokuhamba ngorhwebo ubone abantu abaninzi bedlula kwiiofisi zabo, bethengisile (kakubi kwaye benobunzima ngenxa yokungathembani kunye nokungabikho kwengcaciso ecacileyo) uninzi lweendawo zase-Italiya ezilwa nokubhukisha kwi-Intanethi, kunye neehotele ezinamaqhinga ezinamahotele uhlala ezama ukufikelela kumthengi ngokuthe ngqo, abathengi aboyikayo nabangaqinisekanga, amaxabiso atshontshelwe ngokugqithileyo, nangaphezulu. Iihotele ezipheleleyo azithethi ukuba ukhenketho luyabuyela kwimeko yesiqhelo.
“Umhlaba wethu, weearhente zohambo eziqeshe abantu abangama-80,000, abathe iminyaka bahlawula irhafu bethe cwaka bengazange bacele nto, usekupheleni komgca. Sifumene ihlobo elinqongopheleyo kwiindawo ezingaphandle kweYurophu, sabona inani elilinganayo ne-35% ngaphezulu kwe-2019, kubhekiswa kuphela kwiinyanga eziphezulu zonyaka. Ukuthatha… ngoJanuwari / Julayi, umyinge wokwehla ngama-90%. Ngokusisiseko, akukho nto itshintshileyo.
“Siyakholelwa kwinzondelelo yenu, kodwa sikwakholelwa ukuba ikamva eli sijongane nalo lifuna inkxaso ebalulekileyo ekufuneka yabelwe ngokungxamisekileyo. Ngesi sizathu, mhlawumbi kuyingozi kwaye akuloncedo ukuveza iingxelo zobuxoki.
“Ukusuka kwiMAAVI, ke ngoko, kusiwe kuwe isicelo sokunciphisa ukusetyenziswa kakubi kwamajelo eendaba, ukumamela ukukhala 'kwentlungu nokuphelelwa lithemba' kweearhente zokuhamba kwaye, koogxa, isibheno sokubuyela ezitalatweni Nge-8 kaSeptemba XNUMX. Amaninzi kwaye alwa ngakumbi kunelixa lokugqibela ngokuchasene ne-bla bla bla ekhwaza amaziko, 'Amagama aneleyo. Ixesha liqinisekile. '”
Agasti 25, 2021 kwi-01: 51
Ngelishwa kwiidolophu zobugcisa ezinjengeRoma saphoswa ngamaqela kunye nabakhenkethi abavela ngaphandle kweYurophu.